Archive du 22/02/2012
Praiminisitra Omer Beriziky
Tsy faly tamin�ny nitondrana fiaramanidina manokana tany Antsohihy
Resabe nandritra ny filankevitry ny governemanta notanterahina omaly teny amin�ny Lapam-panjakana Mahazoarivo ny mikasika ilay fanendrena PDS tamina Kaominina efatra tany amin�ny Distrikan�Antsohihy.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Rafolisisoa Hanitriniala no solontenan�ny Acces Zon�olombelona
Tontosa tamim-pilaminana tao amin�ny Mon Gouter Andrefan�Ambohijanahary omaly ny fifidianana izay ho solontenan�ny Acces Zon�olombelona ho mpikambana eo anivon�ny Birao mahaleotena momba ny fifidianana na ny CENI.
Fanampiana ireo traboina
Volam-panjakana no ampiasain�ny TGV ?
Mazava be, hoy ny CT Rakotoarisoa Falihery fa amin�izao voina mihatra amin�ny firenena izao noho ny fandalovan�ny rivodoza Giovanna teo dia miaraka ory amin�ireo rehetra niharam-boina sy ny Malagasy tsy vakivolo izahay avy amin�ny antoko TGV.
Fa misy inona ?
Minisitra telo nantsoina maika anaty fivoriana
Hajo Andrianainarivelo, praiminisitra lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana, Pierrot Rajaonarivelo, minisitry ny raharaham-bahiny ary Ramanantsoa Benjamina Ramarcel, minisitry ny fitaterana.
Misy NOTAM hafahafa indray
Antomotra ny datin�ny 29 febroary, daty voatondron�ny Troika ary nifanarahan�ireo solontena Malagasy tany Pretoria fa hahavitan�ny lal�na momba ny famotsoran-keloka hisian�ny fitoniana eto.
Mitaky vatsim-pianarana 2 volana ny mpianatra
Tsy mbola tena milamina ihany ny tontolon�ny fampianarana ambaratonga ambony eto amintsika hatramin�izao, ary ahiana foana ny hisian�ny fitokonana sy fitakiana hampitarazoka ny fampianarana.
20 andro tany Etazonia
Tafaverina an-tanindrazana rehefa avy nivahiny nandritra ny 20 andro tany Etazonia (Washington, New Mexico, Nouvel Orl�an ary Miami) ny CT Ralaiseheno Guy Maxime, araka fanasan�ny governemanta amerikanina azy amin�ilay programa IVLP (International Visitor Leadership).
Fampakarana ny vidin-tsolika sy ny Jirama
�Henjana sy mafy ho an�ny vahoaka�, hoy Ralison Roger
Taorian�ny kabarin�ny filohan�ny tetezamita tamin�ny fiandohan�ity taona ity dia manomboka mitana ny sain�ny maro amin�izao fotoana ny mety hiakaran�ny vidin�ny solika sy ny jiro sy rano, izay samy iankinan�ny toekarena sy ny fiainana andavanandro.
�29 febroary, izay no fantatray !�
Mandeha sady ezahina aely ny feo, hoy i Zafilahy Stanilas raha nihaona tamin�ireo mpandala ny ara-dal�na tao amin�i Magro Behoririka omaly fa tsy ho tratra ny datin�ny 29 febroary amin�ny fametrahana ny fepetra sy lal�na hisian�ny fitoniana sy ny famafan-keloka faobe.
Mihidy ny �robinet�
Asa ry Jean izay fahamarinany fa ny reko dia manomboka mihidy ny �robinet�-n�ny Banky Foibe noho ny fitokonana ataon�ireo mpiasa ao.
Antenimieran�ny Varotra Antananarivo
Mitaky ny hanafainganana ny fifidianana Rakotozafy Martin
Mbola namerina indray Rakotozafy Martin, filohan�ny Antenimieran�ny varotra Antananarivo fa mankato ny fametrahana ny komity manokana hisahana ny fikarakarana ny fifidianana ny birao vaovao araka izay najoron�ny ministeran�ny varotra tamin�ny alalan�ny didim-panjakana.
Terena hiasa ireo mpitokona
Tsy mbola milamina ny fiarahamonina eo anivon�ny Banky Foiben�i Madagasikara vokatry ny fanalana amin�ny toerany ny Governora Rasamoely Fr�d�ric.
Hanome 150 tapitrisa dolara
Manomboka miverina ny famatsiam-bola iraisam-pirenena hatramin�ny nisian�ny fiaraha-mitantana ny tetezamita.
Tantara tsy mety vita ny ao amin�ny BCM na ny Banky Foiben�i Madagasikara. Taorian�ny fitokonan�ny mpiasa noho ny tsy faneken�izy ireo ny fanesorana tsy ara-dal�na ny governora sy ny fanendrena tsy araka ny lal�na ny olona hisolo toerana azy vonjimaika, dia tonga ny valin-kafatra avy any amin�ny ministeran�ny vola sy ny tetibola.